Galia App Download Ho an'ny Android [2022 Movie App] | APKOLL
Galia App Download Ho an'ny Android [2022 Movie App]
Aprily 14, 2022 Janoary 22, 2022 by Reyan Ahmad
Leo ve ry zalahy ny mijery horonan-tsary sy sarimihetsika mitovy amin'ny Internet? Raha eny, dia eto izahay miaraka amin'ny fampiharana Android mahagaga, izay fantatra amin'ny anarana hoe Galia App. Manolotra sarimihetsika farany, andian-tantara, ary sarimihetsika fohy.
Araka ny fantatrao dia misy fampiharana hafa an-taonany, izay manolotra ireo serivisy ireo amin'ny famaritana. Noho izany, nahoana izahay no manolotra ity fampiharana ity? Betsaka ny antony hanoloranay ity fampiharana ity. Ny endri-javatra tsara indrindra amin'ity fampiharana ity dia ny safidy download.
Manolotra mpizara hafa izy io, izay ahafahanao misintona atiny misy atiny. Misy lafin-javatra hafa amin'ity rindranasa ity, izay hozarainay aminao ao amin'ilay faritra eto ambany. Noho izany, mijanona miaraka aminay fotsiny dia hizara bebe kokoa momba ity fampiharana ity izahay.
Topimaso momba ny Galia App
Fampiharana fialamboly Android izy io, izay manolotra anao handefasana horonan-tsarimihetsika farany, andiany amin'ny fahitalavitra ary sarimihetsika fohy. Izy io koa dia manolotra anao hisintona sarimihetsika sy ny hafa rehetra, izay ahafahanao mitahiry ireo rakitra ao amin'ny fitaovanao ary mijery azy ireo amin'ny fotoana rehetra.
Ny Galia App dia manolotra ihany koa ny fanasokajiana tsara indrindra, izay misy fizarana lehibe efatra samihafa ary ao anatin'izany dia hahita fizarana ho an'ny fialamboly voasokajy kokoa ianao. Noho izany, hizara ny sokajy amin'izany isika Movie App.
Ny sokajy voalohany dia Just Added, izay ahitanao ireo rakitra fialamboly vao nampidirina vao haingana. Izy io dia manavao ary ampiana isan'andro. Noho izany, hahazo foana ny andiany fahitalavitra navoaka farany sy ny hafa ianao. Afaka mahita zana-tsokajy bebe kokoa ianao rehefa midina midina.
Ny faharoa dia ho an'ny Sarimihetsika, Izy io dia manolotra anao fizarana manokana ho an'ny sarimihetsika, izay ahitanao fizarana ho an'ny karazana sarimihetsika samihafa. Eo an-tampony dia hahita ny farany ianao aorian'io HD+ io, avy eo HD, sy ny sisa. Hahazo filma an-taoniny ianao ao anatin'ireo zana-pizarana ireo.
Araka ny fantatrao fa amin'izao andro izao dia aleon'ny olona mijery ny andiany fahitalavitra, noho ny fialamboly tsy miato. Noho izany, eto dia azonao atao ny manana andiany samihafa amin'ny Hollywood, Bollywood, sy ny hafa. Azonao atao ihany koa ny mahita ny rehetra amin'ny zana-fizarana.
Araka ny fantatrao dia anisan'ny fironana amin'ny Youtube ny sarimihetsika fohy. Noho izany, manome fidirana mivantana amin'ny sarimihetsika fohy rehetra. Matetika dia misy votoaty ho an'ny olon-dehibe ao amin'ity fizarana ity, fa ny sasany amin'ireo sarimihetsika manentana fanahy sy ny hafa dia azo jerena ihany koa.
Tsy maintsy tazominao miaraka aminao ny fitaovanao Android, aorian'ny fametrahana azy io eo io. Manolotra atiny olon-dehibe taonina ao izy. Noho izany, karazan-kenatra mahamenatra izany raha tsy ampiasana taona izany. Noho izany, ampidino fotsiny ity rindrambaiko ity ary manomboka mampiasa azy.
Anaran'ny fonosana world.techdoscentchwo.galia
Endri-javatra lehibe an'ny Galia Apk
Raha miresaka momba ny sasany amin'ireo fiasa miaraka aminao izahay ao amin'ilay fizarana etsy ambony, saingy afaka mahita bebe kokoa amin'izy ireo ianao rehefa manomboka mandinika an'ity rindranasa ity. Noho izany, ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hizara ny sasany amin'ireo endri-javatra lehibe an'ity fampiharana ity izahay.
Malalaka ny fampidinana sy ny fampiasana
Sarimihetsika mivantana an-tserasera sy an-tserasera, andian-tsarimihetsika ary sary mihetsika fohy
Servers marobe dia manao fifandraisana malalaka sy fisintomana haingana
Maimaimpoana hiditra amin'ireo fiasa rehetra
Ahoana ny fampidinana Galia Apk?
Araka ny fantatrao dia tsy ara-dalàna sy tsy misy ao amin'ny Google Play Store ireo karazana fampiharana ireo. Saingy mizara rohy azo antoka izahay hampidinana ity fampiharana ity. Mila mahita ny bokotra fampidinana ianao, izay eo an-tampon'ny sy eto ambany amin'ity pejy ity.
Kitiho eo izany ary miandry segondra vitsy mandra-pahatapitry ny fisintomana. Aza adino ny mamela ny 'Source tsy fantatra' alohan'ny fizotry ny fametrahana.
Galia App no ​​fampiharana tsara indrindra handaniana fotoana kalitao. Manolotra anao amin'ny streaming an-tserasera sy an-tserasera tsy misy sarany na sarany Premium. Tsy mila mandany denaria tokana ianao raha hampiasa ireto endri-javatra mahavariana ireto. Noho izany, ampidino izany ary atombohy ny fampiasana an'ity rindranasa ity ary mitsidika ny anay tranonkala.
Sokajy Apps, Entertainment Tags Gaul, Galia Apk, Galia App, Movie App Post Fikarohana
Adidas Confirmed App Download Ho an'ny Android [2022 Update]
ARD Quiz App 2022 Download ho an'ny Android [Fanavaozana]